Yemen: I Gaza sy Ny Renibeko ary ny Labozia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Desambra 2018 17:36 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Namoaka lahatsoratra lalina dia lalina tokoa ny bilaogera Yemenita Maysaa Shuja momba ny labozia, ny herinaratra, ary ny mety ho fampidirana ny angovo nokleary ao amin'ny tanindrazany – firenena iray tsy afaka manome herinaratra mandavantaona.
Ary raha mbola mitohy ny firotsahan'ny fiantràna an'i Gaza sy ny olany eo amin'ny herinaratra, i Maysaa Shuja (rohy maty) kosa miresaka momba ny nampianaran'ny renibeny tia karokaroka azy ireo ny lanjan'ny labozia tanatin'ny fotoana tena nilàn-dry zareo azy, i Allah anie hampandry am-piadanana ny fanahiny.
Manazava i Maysaa:
I Allah anie hampandry am-piadanana ny fanahin'ny Renibeko. Tsy niaina lava mba hitantana ny raharahan'i Gaza izy taorian'ny nahaverezan'ny famatsiana herinaratra azy ireo ka hampahazo tombontsoa azy ireo avy amin'ireo traikefany. Mety afaka nampianatra azy ireo izay tsy hainy momba ny fahatapahana herinaratra sy ny politikan'ny tahiry izy amin'ny alàlan'ny fampiasàna labozia sy ny fomba tsara indrindra ampiasàna azy ireny. Yemenita aho ary mahafantatra bebe kokoa momba ny labozia nóho ny herinaratra. Ary tadidiko fa tapaka nandritra ny telo andro maninjitra ny herinaratra. Mbola melohiko ho tompon'antoka tamin'ny faharatsian'ny fahitàko sy ny fidinan'ny isa azoko tany an-dakilasy tamin'izany fotoana ny fahatapahan'ny herinaratra, eny mety ho tamin'ny tsy fahalavorariana rehetra teo amin'ny fiainako aza. Izany no antony ahatakarako tanteraka ny hirifirin'ireo mponina ao Gaza tsy misy herinaratra, satria be fo aho ary tsy noho ny fananako fihetsehampo tia tanindrazana na ara-pinoana – fa satria fotsiny nandalo ny hirifiry lalovan-dry zareo aho ary mbola mandia izany isan'andro. Saingy tsy atao lohatenim-baovao ny hirifiriko. Tsy tsara vintana tahaka azy ireo ihany koa aho ka nahita fahavalo mibaribary iray toa an'Israely mba homelohina amin'ny fahoriako rehetra.
Ato amin'ny fireneko, zo ny labozia. Arakaraka ny mahatapaka ny herinaratra no mampanify sy mahafohy ny labozianay. Noho ny fitomboan'ireo fahatapahan'ny herinaratra, nanomboka nieritreritra ny renibeko, handry am-piadanana anie ny fanahiny, fa nihananjavona ireo labozia. Nanapa-kevitra ary izy fa hamehy ny fampiasàna azy ireo anatin'ny tokatranonay ka naka ireo labozia teny am-pelatànan'ireo izay nividy izany ary izay rehetra mitahiry labozia dia tratra avokoa noho ny fivarotana izany antsokosoko.
Nametraka politika fitsinjaràna ny labozianay ny renibeko ary tsy nisy afaka nampiasa labozia tato an-trano raha tsy efa nahazo alàlana avy aminy, satria izy no nanapaka izay mahazo labozia, rehefa samy nandinika ny filàny amin'ny maha olona. Ho an'ireo izay nianatra taminay, nety nampitombo ny anjaranay izy ary nanome labozia roa; ireo izay namaky boky tsy mifandray amin'ny fianarana nahazo alabozia iray; ireo izay miresaka kosa tsy nahazo labozia satria tsy ilaina izany rehefa miresaka. Ireo izay mila mampiasa ny efitra fandroana kosa, nahazo labozia kely satria halany ny mandro anaty maizina.
Vantany vao tapaka ny jiro, mavitrika ery ny renibeko mivezivezy eran'ny trano, manara-maso ireo labozia sy ny fampiasàna azy. Alainy ny an'ireo izay milalao ny azy ary hentitra izy rehefa mangataka labozia ry zareo aty aoriana. Tohizany io raharaha io mandra-piverin'ny jiro indray, izay hakany ireo labozia sisa tavela ary hamerenany azy ireo any amin'ny fitoerany tsara afina.
Raha ny marina, zavatra noforonin'ny tandrefana ny herinaratra, izay angamba tsy mendrika anay satria tsy nandray anjara tamin'ny famolavolàna azy izahay. Ny olanay aminy dia mpanjifa fotsiny izahay ary ny olanay amin'izao tontolo izao dia satria mpanjifa fotsiny ihany koa izahay – mpanjifa tsy mitsahatra mitaraina. Ny olanay amin'ireo governemanta Arabo dia ny tsy fitsaharanay mitaky ny zonay, ary izy ireo kosa, etsy andaniny, tsy mitsahatra mandà ny fahazoanay ireo zo ireo. Ny olanay amin'i Gaza dia tsy izy irery no rendrika anaty haizina sy miantso vonjy any amin'ny hafa izay tsy anaty toedraharaha tsara kokoa. Iràka, ohatra, rendrika anaty haizina ankehitriny taorian'ny nananganany mpamokatra angovo nokleary tamin'ireo taona 80. Mampiasa famoronana novokarina tao an-toerana ry zareo amin'izao ary efa miverina manamboatra trano vita avy amin'ny vatosanga fa tsy simenitra mba ahafahan-dry zareo mifanaraka amin'ny tontolo iainany. Toy izao isika, anaty fihemorana tsy an-kiato sy ny tsy rariny ataon'ny haizina, iray amin'ireo tsy rariny ireo ny herinaratra.
Kanefa toa hafa ny endrika ilan'izao tontolo izao. Amin'ny maha Yemenita ahy, hitako ho mampihomehy ny fandraisan'i Londona ny savoka ho vakoky ny lasa sy ny fametrahany izany anatinà Tranombakoka, manao sary sokitra avy aminy ary mandany loharano tena ilaina. Angamba raha nanome ny ampahan'io savoka io ho anay i Angletera, mety nanome labozia roa ho ahy ny renibeko hamakiako boky, ary mety tsy nandany vola nividianana ireto solomaso anaovako amin'izao ireto aho. Mbola adala kokoa nóho izany ny hafa, ary mandray ny savoka ho loharanon-katsaràna ara-pitiavana, kanefa aho nampiasa ny fomba rehetra hakàna antsokosoko ireo labozia sy hanafenana azy lavitry ny sivana napetraka ho fiarovana ny tahirin-dabozia. Niaina ora maro tamin'ny fiainako tanaty fahoriana aho, nieritreritra izay fanantenana atolotry ny fiainana ahy anatin'ny hazavana voafetra. Nianatra nandany andro koa aho, tahaka ny gadra, mba tsy hahafaty ahy noho ny aretimpo.
Kanefa, manolotra zava-baovao foana ireo governemanta isan'andro, ny farany izao dia ireo angovo nokleary sy ny fampiasàna azy ireo anatinà firenena ahitàna tahan'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra mihoatra ny 50 isan-jato. I Allah anie hampandry am-piadanana ny fanahin'ny renibeko. Tsy nahatratra ny fotoana nahitany ny governemanta Yemenita – izay tsy nahavita nanome herinaratra ny vahoakany – miresaka momba ny angovo nokleary, izay tsy ho takatry ny sainy akory izy! Tsy ho vitany akory na ny hanonona tsara ny anarany aza, ary azo antoka fa tsy ho fantany ny loza hianjady amin'ireo labozia izay sarobidy taminy sy notehiriziny kanefa naripakay tanteraka.
“Aza manozona ny haizina fa areheto ny labozia” mba tsy hahadiso fanantenana anao ka hanozona ny haizina avy amin'ny governemanta. Mba ho olompirenena mahita ny lafitsaran'ny fiainana, mandreheta iray amin'ireo labozia efa vonona, isaorana ny governemanta izay nanome azy. Raha ny marina, ny governemanta no nampianatra mafy anay ny fomba fitsitsiana ny herinaratra ary ny renibeko no nampianatra anay ny fanaovana tahiry amin'ny fampiasàna labozia, izay niafara tamin'ny fampianarana ahy hitsitsy ny nofinofiko mba tsy hitomaniako irery anatin'ny haizina tsy misy jiro.